खै प्रतिस्पर्धा नियमन आयोग ? | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय खै प्रतिस्पर्धा नियमन आयोग ?
on: २० मंसिर २०७५, बिहीबार ०५:१८ सम्पादकीय
खै प्रतिस्पर्धा नियमन आयोग ?
विश्वमा मनाइने विभिन्न दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइन्छ र त्यसबारे जनतालाई चेतना दिइन्छ । तर, डिसेम्बर ५ लाई विश्वभर प्रतिस्पर्धा दिवस मनाइए पनि नेपालमा भने कुनै औपचारिक कार्यक्रम गरिएन । सरकार, उद्योगी र उपभोक्तालगायत कुनै पनि सरोकारवालाले यस दिनलाई महत्त्व दिएको पाइएन । आर्थिक उदारीकरण र बजारीकरणलाई नेपालमा पनि स्वीकार गरिएको छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनिए पनि सरकार उदारीकरणकै बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ । यसको मूलमर्म भनेकै प्रतिस्पर्धा हो । प्रतिस्पर्धाकै लागि सरकारले कानून पनि बनाएको छ । तर, प्रतिस्पर्धा दिवस सरोकारवालाहरूको प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्बना नै हो ।
कानून त बन्यो तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न कुनै नियामक निकाय बनाइएन । त्यसैको परिणति हो, अहिले देखिएका सिन्डिकेट र कार्टेलिङ ।
हरेक प्रकारको प्रगतिका लागि प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुन्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाले नै नयाँ आविष्कार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, क्षमताको सर्वोत्तम प्रयोगका लागि पनि प्रतिस्पर्धा नै ऊर्जा हो । सिन्डिकेट, एकाधिकार र कार्टेलिङले अनुचित संरक्षण दिन्छ र व्यवसायलाई फैलन दिँदैन । त्यही भएर नेपालले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि उदारीकरण र बजार अर्थतन्त्रलाई अँगालेको हो । त्यो सकारात्मक देखिएको पनि थियो । नेपालले प्रतिस्पर्धाका लागि विभिन्न ऐन कानून बनाउनुका साथै भएका कानूनको संशोधन पनि गरेको थियो । २०६३ सालमा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन जारी गरी प्रतिस्पर्धालाई कानूनी आधार नै दिएको हो । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएपछि यस्तो प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउनु आवश्यक थियो । कानून त बन्यो तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न कुनै नियामक निकाय बनाइएन । त्यसैको परिणति हो, अहिले देखिएका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ । त्यस्तै यसबारे जानकारीको अभाव भएकाले नै सरकारले उद्योग चलाउनुपर्ने, उद्योगहरूलाई सरकारी संरक्षण चाहिनेजस्ता विरोधाभासी तर्कहरू उठेको पाइन्छ । सरकार आफैले पनि प्रतिस्पर्धा कानूनको मर्यादालाई पालना गरेको पाइँदैन । त्यही भएर नै प्रतिस्पर्धा दिवसमा औपचारिक कार्यक्रम नभएका हुन् ।
वामपन्थीहरूको सरकार भएकाले उसले प्रतिस्पर्धा दिवसलाई वास्ता नगरेको हुन सक्छ । तर, उद्यमी व्यवसायीहरूले पनि यसलाई त्यति महŒव दिएको देखि“दैन । के नेपालका उद्यमी व्यवसायीहरूका लागि प्रतिस्पर्धा आवश्यक नभएको हो त ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । त्यसो त उनीहरूले बेलाबेलामा सिन्डिकेटको पक्षमा उभिएका हुन् कि जस्तो देखिन्छ । कार्टेलिङविरुद्ध सरकारले गरेका कारबाहीको विरोध पनि उनीहरूले गरेका छन् । यसले नेपालको निजीक्षेत्र पनि प्रतिस्पर्धा र बजार अर्थतन्त्रप्रति नकारात्मक छ कि भन्ने सन्देश जान्छ । कमसे कम निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्श आदिले कुनै न कुनै रूपमा यस दिवसलाई सम्झना गर्र्नुपथ्र्यो ।
नेपालले प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । तर, प्रतिस्पर्धाबाट काम दिँदा राम्रो काम भएन भन्ने अर्थमन्त्रीकै प्रतिक्रियाले सरकार स्वतन्त्र बजारसँग तर्सिएको देखिन्छ । सार्वजनिक खरीद ऐनले प्रतिस्पर्धालाई नै आधार माने पनि त्यसको प्रभावकारितामा शंका उब्जिएको छ । त्यसैले यस्ता प्रतिस्पर्धा विपरीत हुने काम र प्रतिस्पर्धामा देखिएका समस्या समाधान गर्न नियामक निकाय जरुरी हुन्छ । विश्वका धेरै देशले कानून र त्यसअनुसार सरकारी निकाय खडा गरेका छन् । तर, नेपालमा नियमन गर्ने निकाय नहुँदा समस्या बढेको हो । अतः प्रतिस्पर्धा कानूनको सशक्त कार्यान्वयनका लागि प्रतिस्पर्धा निमयन आयोग बनाइनुपर्छ ।